Imibono yemanicure ezoshanela kuleli hlobo 2021 | Bezzia
USusana godoy | 02/06/2021 12:00 | Izipikili
Yize ihlobo lika-2020 belingeyona njengoba besilindele, kubonakala sengathi ngo-2021 singaqala ukuphupha noma ngabe kuncane nje futhi njalo sinekhanda. Ngakho-ke, ukuze uvuselele umzuzwana ngokwengeziwe, akukho okufana nokubheja imibono yemanicure ezoshanela kuleli hlobo ngo-2021, esivele ikhona ekhoneni.
Kungakho ukuze ungasali emuva, sikulethela uchungechunge lwemibono eyisisekelo, edingekayo nokuthi uzothanda. Ukuze ukwazi ukuhamba ukuhlanganisa ukuphela kwe-manicure yakho oyithandayo nemibala emihle kakhulu. Ngabe ufuna ukuthola ukuthi imayelana nani?
1 Yimuphi umbala we-nail osetshenziswayo kuleli hlobo lango-2021
2 Izitayela ze-Nail 2021 ukubheja kokungokwemvelo
3 Ukuphrinta kwezimbali kungenye yemibono ye-manicure eshanela
4 Izimpawu zeJiyomethri ezandleni zakho
5 Amachashazi wePolka azoba yimibono yakho efanelekile yokwenza umuthi
Yimuphi umbala we-nail osetshenziswayo kuleli hlobo lango-2021
Siqala ngesinye sezihloko ezibaluleke kakhulu, esikhuluma ngombala ozoba kakhulu kule sizini. Kanjalo, babheja upinki, ngayo yonke imibala yawo. Kepha kuyiqiniso ukuthi umbala ophuzi nawo uzodlala indima enkulu. Okusho ukuthi, imibala ekhanyayo yilokho esizokugqoka kuleli hlobo. Okuthile ebesivele sikulindele ngoba sidinga ukukhanya okwengeziwe nenjabulo eyengeziwe, nasezipikili zethu. Impela i-bubblegum pink ihlanganiswe nomhlophe izokwakha i-manicure engaphezu kokuphelele, kanye nephuzi ukunika impilo kwezinye izimbali. Akuwona umqondo omuhle lowo?
Izitayela ze-Nail 2021 ukubheja kokungokwemvelo
Kuyiqiniso ukuthi uma uthanda ukuwagqoka acijile, ngeke sisuse leyo nkohliso. Kepha ngukuthi ngaphezu kwazo zonke izinketho esinazo, kubonakala sengathi kuleli hlobo kubhejwa imvelo. Izipikili ezimfushane, ezinokuma okusaqanda okuncane, yizona ezizonikeza izandla zakho isitayela esithe xaxa.. Kuyiqiniso ukuthi ehlobo imvamisa sinemicimbi eminingi futhi ngenxa yalokho, sithanda ukushintsha i-manicure yethu. Ngemuva kwalokho yebo, uzokwazi ukukhetha ngesikhathi esifanele leyo miklamo oyithanda kakhulu. Khumbula ukuthi izipikili ezilungiswe kahle, ezinopholishi oyisisekelo onqunu noma omhlophe kanye nokuthinta okukhanyayo kuzohlala kunqoba.
Ukuphrinta kwezimbali kungenye yemibono ye-manicure eshanela
Ngaphandle kokungabaza, ukuqeda ngezimbali kuhlale kungenye yalemibono ye-manicure engapheli esitayela. Ngakho-ke, akulimazi ukuthi sishintsha izitayela. Ngokwesibonelo, ama-daisy amancane ngezinye zezimbali ezicelwa kakhulu, yize ungadonsa amanye amacembe noma uthathwe yizitika. Lokhu kusinikeza isiphetho esihle sobuchwepheshe futhi, kuphelele ukukwazi ukubukisa ngezikhathi ezithile. Futhi, njengoba wazi kahle, ungenza njalo ukuthi ukwakheka kube yisipikili esisodwa kuphela noma ngokuningana. Kuphuma kuwe!
Izimpawu zeJiyomethri ezandleni zakho
Ngenye yalezo zinketho ezingabonakali. Yebo, mhlawumbe kuyiqiniso ukuthi ayinaso isikhathi esichaziwe ngoba kulowo nalowo kuzoba umkhuba. Yingakho ehlobo kubonakala sengathi uthanda ukuphuma ngamandla kunakuqala. Yini enye, uma kunezelwa ama-brushstrokes athile we-psychedelic, kungcono kakhulu. Ungazihlanganisa ngamathoni akhanyayo naqhakazile ukuze uzenze zigqame kunanini ngaphambili. Impela ngaleyo ndlela uzothola umphumela omuhle kakhulu.
Amachashazi wePolka azoba yimibono yakho efanelekile yokwenza umuthi
Njengama-motifs we-geometric, amachashazi e-polka akuyona enye yale mibono ezosimangaza kepha afuna ukuba eceleni kwethu ngisho nasehlobo. Ngakho-ke, kusinika izinketho ezinhle ngokucabanga ngakho. Ngoba ngumzuzu lapho singahlanganisa khona imibala esiyithanda kakhulu noma sivumele ukuthathwa yilabo esibashoyo njengombala opinki nophuzi ukwakha umkhuba. Abadumile sebevele bakhetha amachashazi e-polka ngesitayela se-gradientAkuwona umqondo omuhle lowo?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Izipikili » Imibono ye-manicure ezoshanela kuleli hlobo ngo-2021